Ankifonofono, kihonohono… mamono | NewsMada
Ankifonofono, kihonohono… mamono
Mbola mety misy ihany ve, sanatria, ny ankifonofono amin’izao ady mafy amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Nahabe resaka sy nampiaka-peo ny sasany talohaloha teo, ohatra, ny amin’izay hoe fangaraharan’ny fitantanana ny famatsiam-bola sy ny fanampiana avy amin’ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka. Soa ihany, efa nisy ny tatitra. Mbola hisy ihany ny mila kisa?
Ary ny amin’ny ady mivantana amin’ny valanaretina? Tsy ilaozan’izay tsy mahazo resaka any ho any… Na ny ny momba ny tsimokaretina Conoravirus, na izay atao sy fomba isorohana azy ary iadiana aminy. Na ny fanefitra sy ny fanafana amin’izany aza, mbola mampanontany tena ny sasany: mahomby sa tsia? Tsy ampy ny fanazavana sa misy ny tsy mahazo resaka na minia tsy miraharaha?
Tsy vitan’izany, eny ho eny ihany, ohatra, ny tsy ma­naraka fepetra. Tsy mety ho tan-dalàna? Misy hatrany ny tsy manao aron-tava, tsy manasa tanana matetika. Tsy misy miraharaha firy izay elanelana iray metatra eny an-dalambe, an-tsena… Inona ny andrasana, rahoviana vao hahatsiaro tena? Efa iaraha-manaiky sy miaina isan’andro izao fa tsy hita maso ny fahavalo, tsy mifidy olona, mamono…
Amin’izany, misy ihany ny kihonohono, hanamarinan’ny sasany tena amin’ny hevi-disony, ny fomba fijeriny, ny toetra amam-pomba ratsiny. Tsy marina, hono, ohatra, ny tarehi­marika mivoaka. Mety ho marina izay fa misy ny marary mamonjy avy hatrany dokotera, ohatra, na antony hafa. Na izany aza, famendrofendroana sy fanakorontanana no be ao an-doha fa tsy fisorohana sy fialana ny kifonofono.
Loza iray, loza roa: mbola misy ve tokoa ve ny ankifono­fono, hany ka mandaitra amin’ny sasany kihono­hono… ma­mono? Mandreraka ny hafa tsinona, mandemy, mana­kivy, manakorontana aza. Misy ny maty ho azy amin’izany, sana­tria? Aleo mitandrina izay lazaina, mandinika sy mamaka­faka izay re. Mamono ny ankifonofono sy ny honohono amin’ity ady anaty akata… aretina.
“Aza misoka-bava raha tsy azonao antoka fa tsara no ho ny fanginana izay holazainao”, hoy ny ohabolana arabo izay.